अनुक्रमणिकामा समावेश गर्न शीर्षकको स्तरहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिकामा कुन सूचना समावेश गर्ने भनेर निश्चित गर्न यो क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस्.
रूपरेखा तहहरू प्रयोग गरेर अनुक्रमणिका सिर्जना गर्दछ,त्यो,कुनै एक पूर्वपरिभाषित हेडिङ शैलीहरू (हेडिङ १-१०) सँग ढाँचाबद्ध गरिएका अनुच्छेदहरू अनुक्रमणिकामा थप गरिन्छन।
अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरूको रुपमा तपाईँले मानाङ्कन शैलीहरूसंवादमा निर्दिष्ट गर्नुभएको अनुच्छेद शैलीहरू समावेश गर्दछ । तपाईँले अनुक्रमणिकामा समावेश गर्न चाहनुभएको अनुच्छेद शैलीहरू चयन गर्न, यो बाकसको दायाँतिर मानाङ्कन शैलीहरू (...) बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
शैलीहरू प्रदान गर्नुहोस्
मानाङ्कन शैली संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँले अनुक्रमणिकामा समावेश गर्न अनुच्छेद शैलीहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
अनुक्रमणिका प्रविष्टि समावेश गर्नुहोस् जुन तपाईँंले घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - प्रविष्टि अनुक्रमणिकामा रोज्नुहोस् गरि राख्नु भयो.